Home Wararka Iska hor imaad u dhexeeya ciidanka NISA & AMISOM oo Xalane ka...
Iska hor imaad u dhexeeya ciidanka NISA & AMISOM oo Xalane ka jira
Saraakiisha Midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in ay isku dhaceen Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA, taasoo ku saabsan mas’uuliyadda amniga Xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho, sida ay MOL u xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah oo la hadlay.
Khilaafka ayaa la sheegay inuu salka ku hayo kadib markii Hay’adda NISA ay diiday in la kala qaado laba Koontarool oo ku yaalla gudaha Xerada Xalane, kadib markii ATMIS ay dalbatay. ATMIS aya qaba walaac xagga amniga ah & iyadoo ay jirto shaki laga qabo ciidanka NISA oo la isku aamini karin.
Xerada Xalane ayaa ah xarun weyn oo Qaramada Midoobay leedahay oo ay degan yihiin hay’ado caalami ah iyo xafiisyo diblomaasiyadeed oo reer galbeed ah oo ay ku jirto safaaradda Mareykanka. Xarunta ayaa ku dhagan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Labo toddobaad ka hor, dagaalyahannada Al-Shabaab ayaa dilay saddex qof oo kala ahaa laba askari oo ilaalo u ahaa iyo nin booliis ah, kaddib weerar hubeysan oo ka dhacay afaafka hore ee xerada Xalane. C/casiis Abuu-Muscab oo ah afhayeenka Al-shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda weerarka.
Previous articleCiyaaryahaynka weyn Ambry Thomas oo ku sugan Somaliland, howlo tabaruca kawada halkaas
Next articleR/W Rooble oo dalka ka ceyriyey wakiilka Midowga Afrika Francisco Madeira
Xiriirka Somaliland & Jabuuti oo sii xumaaday kaddib markii Hargeysa ay...